Unovalo umculi kamasikandi - Ilanga News
Home Izindaba Unovalo umculi kamasikandi
Unovalo umculi kamasikandi
Kubulawe amagidangoma akhe
UTHUKA izanya umculi kamasikandi, u-Ali Mgube, ngokudutshulwa kubulawe amagidangoma akhe amabili elandelana enyangeni eyodwa. UMgube uthi uzizwa engaphephile ngenxa yokubulawa kwezinsizwa asebenza nazo eqenjini lakhe, Ama-SAP.
Ukusho lokhu nje, ngoLwesitha-thu olwedlule eHostela eMerafe, eGoli, kudutshulwe kwabulawa uSiyabonga Ntombela waseNkandla kanti emasontweni amabili adlule kudutshulwe uMbuso Ngubane waKwaMaphumulo eHostela eDube, khona eGoli.
Ngokuthola kweLANGA, uNto-mbela uxabane nomnikazi wamate-kisi okubikwa ukuthi ngowaseMsi-nga, ovele wakhipha isibhamu wa-mdubula phambi kwabantu.
UMgube uthi ukubulawa ngalolu hlobo kwezinsizwa asebenza nazo, sekuyamethusa ngoba akazi ukuthi sekuzolandela bani.
Uthi akayazi inhloso yokubulawa kwazo.
“Akekho umuntu esithusene naye siyiqembu, kodwa indlela okudu-tshulwa ngayo abafana bami kayi-nginiki ukuthula. Uma ngilandelela umsuka wale nto, ngivele ngithole izinto ezingezwakali kahle, okuthi uma uzibuka uvele ubone ukuthi besingekho isidingo sokuba seku-ngaze kufe umuntu, kodwa-ke ngiye-themba ngokuhamba kwesikhathi sizowuthola umnyombo wale nto,” kusho uMgube.
Kuthiwa lo mnikazi wamatekisi ushaye uNtombela ngempama, kwathi uma leli ciko libuza ukuthi lishaywa nje, lenzeni, lo somatekisi wabuza ukuthi ngabe lifuna ukubona okungaphezu kwalokhu akwenzi-le yini. Yilapho-ke okuthiwa ulande isibhamu wadubula uNtombela esiphangeni.
Emasontweni amabili edlule kubulawe uNgubane okubikwa ukuthi bekunombhikisho wabahlali basehostela emuva kokucishelwa kwabo ugesi.
Kubikwa ukuthi kuqhamuke khona inhlamvu ebizintwizela nje, yambulala. Kuzokhumbuleka ukuthi eminyakeni emibili edlule kwadu-tshulwa ngentululwane yezinhla-mvu uMtshengiseni “Menziwa” Biyela, owayeyimenenja kaMgube, khona eHostela eMerafe.
Okhulumela amaphoyisa eGauteng, uCapt Mega Ndobe, uthe icala livulwe esiteshini samaphoyisa eMoroka, kodwa bekungakaboshwa muntu, amaphoyisa asaphenya.
Previous articleUShenge ukhale ngamadoda kweye-IFPWB
Next articleKuthunjwe owesifazane befuna ‘eyefa’